Accueil > Gazetin'ny nosy > Minisitra Ralava: Saika ho felahin’i Jao Jean tehamaina
Minisitra Ralava: Saika ho felahin’i Jao Jean tehamaina
Omaly talata faha 13 martsa 2018 dia mbola zava-doza koa no nitranga tao amin’ny lapan’ny Antenimierampirenena tao Tsimbazaza. Raha mbola niandry ny fidirana hanombohan’ny fandinihana sy ny fanazavana mahakasika ny lalàm-pifidianana ny rehetra, ka niresaka teo amin’ny ala-trano ny minisitra sy ny depiote, dia gaga ny olona rehetra tao amin’ity toerana ity fa nifampivazavaza sy nifampanao ialahy ingahy minisitran’ny Fitanterana Ralava Beboarimisa sy ny filoha lefitran’ny antenimierampirenena Rémi dit Jao Jean.
Raha nifamaly tokony ho roa minitra teo izy roalahy ireto dia avy hatrany dia nanatona ingahy Jao Jean handeha hanehaka tehamaina an’ity minisitra ity. Nanakana izany ny minisitra teo nanatrika dia ingahy Nepatraiky sy Paul Rabary ary Jean-Jacques Rabenirina.
Vaky nandositra ingahy minisitra ny Fitanterana, ka lay lava moa izao! Poa toa izay dia tsy hita izay niereny. Nanaraka azy avy ao aoriana ilay mpiambina azy.
Ingahy Jao Jean indray lasa namonjy ny birao fiasany. Tonga nanaraka azy tany ny minisitra telo lahy voalaza eo ambony ireo ary mbola nanampy azy koa ny minisitra ny asa vaventy Eric Razafimandimby tao aoriana kely.
Raha nanontaniana makasika ity raharaha ity ingahy Jao Jean dia toa izao no navaliny anay mpanao gazety: “ nahoana hoy izy no mandika lalàna sahady ity minisitra ity, ka mangalatra sy manao hadisoana amin’ny fanaovana propagandy mialohan’ny fotoana tany Antsohihy ny zoma sy sabotsy ary alahady 09,10, 11 martsa 2018 lasa teo. Tsy izany ihany fa nahoana no mandeha any Antsohihy izy nefa misy solombavambahoaka sy filoha lefitran’ny Antenimierampirenena any ka tsy milaza amin’izany izy. Ingahy Hyacinthe izay filohan’ny filakevitran’ny Jirama sady mpanolotsaina manokan’ny filohan’ny repoblika izany no nahindrahidran’ity minisitra Ralava Beboarimisa ity tany. Tena fanamparam-pahefana sy tsy fanarahan-dalàna no nataon’izy roalahy ireto.
Omby 35 no novonoina nandritra ny telo andr, tao Tsimangirina, Anjialova ary Antsohihy no nanaovana famoriana olona sy nandaniana omby ireo.
«Tsy mety amiko izany ka raha tratrako teo iny dia notampifiko hahalany fa tsy mety ny nataony”. Olona toa ireny tsy tokony hanao fomba toa izao. Tsy izany ihany fa toa izao no filazan’ingahy Beboarimisa Ralava hoe hamboarina ny “port” ao Antsohihy, sy ny “gare routière” raha mifidy an’i Hyacinthe ianareo aty Antsohihy. Fa angaha volany no hanaovana izany fa tsy an’ny fanjakana ka isekosekoany toa izany? Tsy vitan’izany fa mbola mampiasa ny talen’ny rano ao Antsohihy ampanaovina propagandy mitety any ambanivohitra sahady ary mampiasa ny fiaram-panjakana sy ny volam-panjakana amin’izany.
Samy mpitondra fanjakana izahay ka tsy ekeko ny fomba toy izao hoy i Jao Jean.
Marika’ny korontana mety hisy eto amin’ny firenena iny nitranga omaly iny.